Fomba 9 hisorohana ny kolikoly ataon'ny PST - DataNumen
Home Products DataNumen Outlook Repair Fomba 9 hisorohana ny kolikoly ataon'ny PST
Fomba 9 hisorohana ny kolikoly ataon'ny PST
Ireo rakitra Outlook PST dia mora voan'ny kolikoly. Misy fomba hisorohana an'io ve? Ny valiny dia ENY! Ity ambany ity dia tanisiko 8 most fomba lehibe hisorohana ny fisie PST tsy ho tratry ny kolikoly na simba:
AZA mamontsina ny rakitra PST anao. Na dia manohana rakitra PST lehibe toy ny 2003GB aza i Outlook 2007/20 ankehitriny. Ary ny Outlook 2010 dia manohana 50GB, mbola tena atolotra anao tsara ny tsy tokony hihoatra ny lehibe ny fisie PST 10GB, satria:
Most miadana be ny fandidiana miaraka amina rakitra PST lehibe
Azo inoana fa lasa mpanao kolikoly ny rakitra lehibe
Na dia misy aza ny fanaovana kolikoly madinidinika amin'ny alàlan'ny Outlook na scanpst, raha toa ka be ny rakitra PST dia mbola handany fotoana ny fizotrany fanamboarana.
Outlook 2003-2010 dia manohana izao hanokatra rakitra PST maromaro ao amin'ny tontonana havia. Noho izany, tena ampirisihina ianao hamindra ny mailakao amin'ny rakitra PST maro samihafa miaraka amin'ny fitsipiky ny Outlook, hampihenana ny haben'ny rakitra PST tsirairay avy.
AZA avela hanakaiky ny 2GB ny fisieo PST efa niova endrika taloha. Microsoft Outlook 2002 sy ny kinova taloha dia mametra ny haben'ny rakitra Personal Folders (PST) ho 2GB. Isaky ny manakaiky ny 2GB ny haben'ny fisie PST dia hiatrika olana miovaova ianao ary mora trangana kolikoly ilay rakitra PST. Noho izany, alao antoka foana fa ny rakitra PST efa niova endrika taloha dia kely noho ny 1.5GB dia fanao tsara.
AZA miasa amin'ny mailaka marobe. Hakatona tsy ho faty i Microsoft Outlook raha toa ka mampiasa mailaka marobe ao anatin'ny fotoana iray ianao. Ary aorian'ny fikatsoana maty, tsy maintsy hanakatona ny Outlook tsy ara-dalàna izay mety hiteraka kolikoly ao amin'ny PST ianao. Ny fetran'ny fanandramana dia 10,000 mailaka. Noho izany, rehefa manandrana mifantina, mamindra, mandika na mamafa ny mailaka mihoatra ny 10,000 dia aza ampiasaina amin'ny andiany iray. Aleo miasa amin'ny most Mailaka 1,000 indray mandeha, avereno ny fandidiana mandra-pandamin'ny mailaka rehetra.
AZA mitahiry ny fisieo PST amin'ny kapila tambajotra na mpizara. Ny rakitra PST dia natao hitahiry amin'ny solosaina eo an-toerana. AZA tahirizina anaty drive lavitra na serivera satria tsy afaka manohana ny fidirana mafy amin'ny rakitra PST ny tontolon'ny tamba-jotra ary hiteraka kolikoly matetika amin'ny rakitra PST. Aza zaraina ihany koa ny rakitra PST amin'ny tamba-jotra ary AZA avela hiditra amin'ny kopian'ny PST mitovy amin'ny tambajotram-pifandraisana ny mpampiasa maro, izay mora mametraka kolikoly.
AZA akatona ny Outlook raha mbola mandeha izy io. Raha manidy tsy ara-dalàna ny Outlook ianao raha mbola mandeha, dia ho simba mora foana ilay rakitra PST izay idiran'i Outlook amin'io fotoana io. Noho izany, tokony TSY tapaho ny fomba tsy ara-dalàna an'i Outlook ao amin'ny mpitantana ny lahasa. Indraindray rehefa manidy ny Outlook ianao dia mbola hihazakazaka any ambadika any, handrindra asa sasany, toy ny mandefa / mandray mailaka. Amin'ny tranga toy izany, indraindray, ianao dia mety mahita kisary Outlook kely ao anaty lozisialy. Na izany aza, ny fomba tsara indrindra hamaritana raha mbola mandeha i Outlook dia ny start "Task Manager" ary zahao raha "OUTLOOK.EXE" dia ao amin'ny "Ny fomba fanaovana" lisitra (Sivano ny lisitra hanampy anao hahita azy mora kokoa.). Indraindray ianao dia hahita an'i Outlook mijanona ao anaty fitadidiana mandrakizay. Izany dia matetika satria i Outlook dia manandrana mandefa / mandray mailaka amin'ny alàlan'ny tamba-jotra ary tsy mandeha tsara ny tamba-jotra misy anao, noho izany dia tsy maintsy miandry tsy misy farany i Outlook na aorian'ny fotoana fiasana. Amin'ny tranga toa izany, raha te hanafainganana ny fanakatonana ny Outlook ianao dia azonao atao ny manafoana ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra ampiasain'i Outlook amin'ny tanana. Aorian'izany, hijanona tsy ho ela ny fifandraisana Outlook ary hamono ny lahasa ifotony ary hivoaka tsy ho ela. Ho an'ny tranga hafa, raha toa ka mijanona tsy misy farany ny lovia Outlook na Outlook dia azonao atao ny manandrana Restart Outlook, miandrasa minitra maromaro, ary avy eo mivoaka, ny fomba fanao toy izany dia mety hanampy an'i Outlook hivoaka tanteraka ny rafitra.
Hamarino foana fa efa nivoaka i Outlook alohan'ny hanidiana / hamonoana ny solosainao. Toy ny 5 ihany, raha manidy na mamono ny solosainanao ianao nefa tsy miala amin'ny Outlook, dia mety ho simba tokoa ny rakitra PST anao. Ka na dia somary manelingelina kely aza dia alao antoka fa efa nivoaka ny Outlook alohan'ny hanidiana ny rafitry ny solosainao. Na azonao atao ny manamboatra rindranasa kely hijerena azy ho azy ho anao.
Mitandrema amin'ny programa AntiVirus anao. Raha lehibe ny rakitra PST misy anao ary misy mailaka marobe, ary hiaro azy ny programa AntiVirus anao. Avy eo most ny fiasa miaraka amin'ireo mailaka ao amin'ny fisie PST anao dia ho voakasiky ny programa AntiVirus anao koa. Raha miadana ny programa dia hihena ihany koa ny fandidiana. Voalaza fa misy programa AntiVirus sasany mety hanimba ny fisie PST. Mety hamafa fisie PST aza i Microsoft OneCare.
Mitandrema amin'ny Add-Ins an'ny Outlook. Misy ny Add-Ins an'ny Outlook misy lesoka mety hiteraka kolikoly ao amin'ny rakitra PST anao raha tsy natao tsara na mandeha tsara. Noho izany, indraindray dia mila manafoana ny Add-Ins ianao raha toa ka simba matetika ny fisie PST.
Avereno atao isan-kerinandro ny rakitra PST anao. Ny backup dia fomba tsara indrindra hisorohana ny fahaverezan'ny data. Ataovy miverimberina foana ny fisieo PST ka isaky ny simba ny fisieo PST ary tsy azo averina dia azonao atao ny mamerina ilay backup farany.
Raha simba ny rakitra PST anao, dia mbola azo atao ny manamboatra sy manamboatra azy, miaraka amin'ireto fitaovana manaraka ireto:
scanpst.exe. Antsoina koa Fitaovana fanamboarana Inbox. Ity dia fitaovana maimaimpoana napetraka miaraka amin'ny Outlook. Afaka manamboatra most ny lesoka kely sy lesoka kely ao amin'ny fisie PST anao. Ny fampahalalana misimisy kokoa dia azo jerena ao amin'ny Eto.
DataNumen Outlook Repair. Raha scanpst tsy afaka manamboatra ny rakitra PST anao, na tsy afaka mamerina ny mailaka tadiavinao, dia azonao ampiasaina izany DataNumen Outlook Repair. Afaka mamerina ilay rakitra PST simba be io. Raha mbola misy ny angon-drakitra Outlook ao amin'ny rakitra PST misy kolikoly, dia DataNumen Outlook Repair afaka mamerina azy ireo ary tehirizina ao anaty rakitra PST raikitra.